Isikhokelo sokwenza i-imeyile yakho ivule, cofa uQedile, kunye namaxabiso okuTshintsha | Martech Zone
Ingxoxo enye endinayo veki nganye kunye nabaxumi yindlela ekhathazayo ekhulayo yokwakha kunye nokugcina inkqubo ephumeleleyo yokuthengisa nge-imeyile. Ukubeka ngokulula, njengoko uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile lukhula, kunjalo nentloko yakho yokuhambisa. Kubonakala ngathi ababoneleli ngeenkonzo ze-intanethi balishiyile naliphi na ithemba lokufumana eyona mikhwa mihle kwaye banezilumko ezizizidenge eziqhubeka nokohlwaya abathumeli abalungileyo.
Kwimeko apho, omnye woogxa bam kushishino ufumene i-Yahoo! ukuvimba i-100% ye-imeyile yakhe- ngaphandle kweqonga lakhe lokunamathela kuyo yonke into umgangatho oshishino kunye neyona ndlela ingcono yokusebenza zidweliswe yiYahoo! Umphathi weposi. Njengovavanyo, wahambisa i-imeyile yakhe wayisa kwidilesi entsha ye-IP kwaye ii-imeyile zakhe zaqala ukuhamba ngaphandle komcimbi. Umxholo ofanayo, ababhalisi abafanayo, idilesi ye-IP eyahlukileyo. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ii-ISPs ngokungacwangciswanga zivimba iidilesi ze-IP ukubona ukuba inkampani iyaphendula na. Ubuncinci i-Yahoo! ziyaliwe ii-imeyile, nangona… ezinye ii-ISPs zininzi nje indlela eya kwifolda ye-junk engaziwayo kumthumeli.
Ewe, kukho imeyile yokuthengisa iimpazamo onokuyiphepha ngelixa usenza uluhlu lwakho kunye nomxholo. Kananjalo, kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa i-imeyile yakho. Le infographic, UkuThengisa nge-imeyile iiHacks kunye neziFundo zeMeko, ukusuka 99Firms iinkcukacha ezininzi zeendlela zokwenza ngcono. Andinguye umlandeli omkhulu wekota yimfumba… Ndifumanisa ukuba zonke ezi ndlela zikulungele ukuvavanywa ngenkqubo yakho ye-imeyile.
Iindlela zokwenza i-imeyile zibandakanye
Ukulungiswa komgca weSifundo -I-Algorithms kunye nokuziphatha kwababhalisileyo benze umgca wesifundo yeyona nto ibaluleke kakhulu ekufumaneni i-imeyile okanye ukucofa kuyo. Iinkampani ezininzi ziyabandakanya emoji njengokuba.
Isicatshulwa sangaphambi -Ukuba sithathe indawo yesicatshulwa sendaba esingaphambili sombhalo wamandla ngombhalo onamandla owakhiwe kumxholo wethu weendaba, sabona ukonyuka kwangoko kokubekwa kwebhokisi engenayo kunye namaxabiso avulekileyo. Abantu bafunda ukujonga kwangaphambili-thatha ithuba lokwenza oko!
Igama lomthumeli - Ama-68% amaMelika avula i-imeyile ngokusekwe kwi "Ukusuka kwigama" abonayo. Ngaba igama lakho elivela kwigama lakho liyimele kakuhle inkampani yakho? Ngaba iyahambelana nedilesi yemeyile yakho?
Ukwahlulahlula Ukwahlula uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile kunye nokujolisa kumxholo uqhuba iziphumo ezimangalisayo kodwa uhlala ungakhathalelwa ngenxa yobunzima obubandakanyekayo. Kufanelekile umzamo kwaye uninzi lwamaqonga entengiso ye-imeyile ayayixhasa.
zobuqu -Yiya ngaphaya [Faka iGama lokuQala] kwaye unikezele ngeenkcukacha kwiphulo lakho le-imeyile elikhethekileyo kulwazi lomrhumo kunye nembali yokuthenga. Abathumeli be-imeyile babone ukonyuka kwe-92% kwingeniso kwaye kabini inqanaba lokuguqula xa ii-imeyile zenzelwe umntu.
Ukuzenzekelayo kunye nokubangela Ixesha liyinto yonke, ke ukufumana i-imeyile esekwe kwithemba lakho okanye indlela yokuziphatha kwabaxumi kubalulekile ukuqhubela phambili ubudlelwane.
Amaqhosha kunye neefowuni zokwenza isenzo -Ukuba uyifotile i-imeyile njengephepha lokufika, ngaba kukho umnxeba wokuya kwisenzo ukuqhuba umrhumeli kwinyathelo elilandelayo lokuzibandakanya nophawu lwakho? Ukuba akunjalo, uphoswa lithuba elikhulu lokwandisa i-imeyile yakho.
imifanekiso -Iibhokisi zebhokisi engenayo zixakekile, ke kulindeleke ukuba umntu obhalisileyo afunde onke amagama ayilwe ngononophelo owafake kwi-imeyile yakho akunakwenzeka. Yandisa ukuzibandakanya kunye nokucofa ngokubonelela ngemifanekiso enyanzelisayo ukutsala umrhumeli ukuba afunde kwaye acofe. Yongeza ii-GIF zoopopayi ukongeza ubuqaqawuli!
yokuzonwabisa Ngelixa amaqonga e-imeyile amaninzi engayixhasi ngokupheleleyo ividiyo, ubuncinci unokubonelela umfanekiso wevidiyo yakho ngeqhosha lokudlala. Xa umbhalisi ecofa iqhosha lokudlala, bazise kwiphepha eliqala ngokuzenzekelayo ividiyo kubo!
Uloyiko lokulahleka (FOMO) -Ukudala imeko yongxamiseko ejikeleze ii-imeyile zakho kunokuqhuba amaxabiso avulekileyo kunye namaxabiso okuguqula kakhulu. Ndiyakuthanda ukubandakanya oopopayi ababala ukubala ukuqhuba ekhaya into yokuba kukho ukuphelelwa kwexesha okunxulunyaniswa nesithembiso.
Isikhathi - Libala Elona xesha lilungileyo lokuthumela ngamampunge. Vavanya amaxesha ahlukeneyo okuthumela nge-imeyile uze uyithumele xa isenza umahluko omkhulu. Unokuba unqwenela ukwahlulahlula kunye nokugxotha ukuthumela ngokusekwe kwimimandla yexesha.
Ukuphendula ngeselfowuni I-42% yayo yonke i-imeyile ivula ivela kwifowuni ephathekayo. Ngaba ukhe wayijonga i-imeyile ukuze ubone ukuba ijongeka kanjani kwifowuni? Unokumangaliswa, okanye woyikiswe yimpembelelo ye-imeyile engacwangciswanga kakuhle.
Umxholo we-imeyile Inqanaba lokufunda kunye nobude bekopi banokuba nefuthe kunqakrazo lwakho kunye nakumaqondo okuguqula.
Ukufomatha i-imeyile -Uke uzame ukuthumela i-imeyile yokubhaliweyo endaweni ye-imeyile ye-HTML ukuze ubone ukuba yintoni umahluko wokuphendula? Ngelixa ii-imeyile ze-HTML zinokuba zintle, banokungayiqwalaseli eyenziwa ngumbhalo we-imeyile!
Nantsi i-infographic epheleleyo, kunye nezinye iinyani zokuzonwabisa kunye neenkcukacha-manani kuyo yonke!
tags: Elona xesha lilungileyo lokuthumelai-imeyile ezenzekelayoamaqhosha e-imeyileimeyile call kwisenzoUmxholo we-imeyileukufomatha i-imeyileimifanekiso ye-imeyileInkqubo yentengiso ye-imeyileUkulungiswa kwe-imeyileukwenziwa kwe-imeyileintloko ye-imeyileulwahlulo lwe-imeyileukuthumela amaxesha nge-imeyileimeyile ithumelaUmbhalo we-imeyileUkwenza i-imeyileividiyo ye-imeyileukwesaba ukulahlekafomoIgamahtml imeyilenewsletterUkulungiswai-imeyile ecacileyoIsicatshulwa sangaphambiliigama lomthumeliumgca wokufundauvavanyo
Imagga: I-API yoLwamkelo loMdibaniso loMfanekiso oluNikwe ubuNgcali boBugcisa